शेर्पाहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै टान द्धितीय उपाध्यक्षमा तेञ्जिङ शेर्पाको उम्मेद्धारी
काठमाडौं । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)को यही भदौं २० गते हुन लागेको निर्वाचनमा अञ्जन थापा (कुमार) प्यानलबाट द्धितीय उपाध्यक्षका उम्मेद्धार हुनुहुन्छ तेन्जिङ शेर्पा । पर्यटन व्यवसायमा शेर्पा समुदायको गहिरो सम्बन्ध र योगदान रहेपनि संघसंस्थाप्रति विकर्षण देखिरहेको बेला सबैको प्रतिनिधित्व गर्दै तेन्जिङले टान नेतृत्वमा दाबेदारी प्रस्तुत गर्नुभएको हो । तसर्थ, व्यवसायीहरुले उहाँलाई सशक्त उम्मेद्धारको रुपमा लिएका छन् । सोलुखुम्बु जिल्लाको तामाखानीमा जन्मिनुभएका शेर्पाले विगत दुई दशकदेखि निरन्तर पदयात्रा तथा पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रसँग उठबस गर्दै आउनुभएको छ । पियोर भिजन एडभान्चरका प्रबन्ध निर्देशक तेन्जिङ्ग नेपालका पर्वतीय र पदयात्रा पर्यटन व्यवसायको क्षेत्रमा परिचत नाम हो । शालिन व्यक्तित्वका धनी तेन्जिङ बोलेर… बाँकी »
टान सदस्यको सशक्त दाबेदार रबिन्द्र महर्जन
शिखरपोष्ट रिपोर्टर काठमाडौं । रविन्द्र महर्जन ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)को यही भदौं २० गते सम्पन्न हुन लागेको निर्वाचनमा सदस्य पदका सशक्त दाबेदार हुनुहुन्छ । एक्स्पीरेन्स आउटडोर नेपालका प्रबन्ध निर्देशक महर्जनले खुमबहादुर सुवेदी प्यानलबाट कार्यसमिति सदस्य पदमा उम्मेद्धारी दिनुभएको हो । बुझेर अनि पढेर पर्यटन क्षेत्रमा लाग्नुभएका उहाँलाई समग्र पर्यटन क्षेत्रकै एक डायनामिक व्यक्तित्वका रुपमा लिन सकिन्छ । विस. २०२९ साल असोज २६ गते ललितपुरमा जन्मिनुभएका महर्जनले प्रारम्भिक शिक्षा ललितपुरबाट सुरु गरेर बुढानिलकण्ठ स्कुलबाट माध्यामिक तहको अध्ययन गर्नुभएको थियो । काठमाडौंमै आइकम अध्ययन गर्नुभएका उहाँले राष्ट्रिय छात्राबृत्ति पाएर अष्ट्रियाबाट माउन्टेन टुरिजममा स्नातक गर्नुभयो । माउन्टेन टुरिजम अध्ययनसँगै सानैदेखिको चाहाना… बाँकी »
चर्चामा टान कोषाध्यक्ष उम्मेद्धार ऋतु ग्याम्दान !
काठमाडौं । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)को आसन्न निर्वाचनमा खुमबहादुर सुवेदी समुहबाट कोषाध्यक्ष पदका लागि उम्मेद्धारी दिनुभएकी ऋतु ग्याम्दान चुनावी चर्चामा हुनुहुन्छ । दुई वर्षअघि सबैभन्दा बढि मत ल्याएर महिला सदस्य बन्नुभएकी ऋतु ग्याम्दानले टान ज्वाइन्ट ल्होसार कल्चर प्रोग्राम र टान इन्टरनेशनल लाङटाङ म्याराथनकी संयोजक भएर आफ्नो कार्यकुशलता प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ । व्यवस्थापनमा स्नातक रसुवाकी ग्याम्दान एकाध महिला र्‍याफटिङ इन्स्ट्रक्टरमध्येकी एक हुनुहुन्छ । ग्याम्दानले आफुलाई साहसी पर्यटन व्यवसायीको रूपमा उभ्याउन सफल हुनुभएको छ । ट्रेकिङ गाइड र कायाकर समेत रहनुभएकी उहाँ नेपाल फिमेल गाइड प्रालिकी प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ । सेलिब्रेटी वुमनहुड नवदेवी सम्मान २०७० बाट सम्मानित नेपाल उस्सु महांघकी… बाँकी »
खुम सुबेदी समुहबाट टान प्रथम उपाध्यक्षमा चोलेन्द्र बहादुर कार्कीको उमेद्द्वारी
काठमाडौं । हिमालयन जोय एड्भेन्चरका प्रबन्ध निर्देशक चोलेन्द्र बहादुर कार्कीले ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)को आसन्न निर्वाचनमा प्रथम उपाध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी दिने निश्चित भएको छ । नेपाल लोकतान्त्रिक पर्यटन व्यवसायी संघको उपसभापतिसमेत रहेका समेत रहनुभएका कार्की काङ्ग्रेसनिकट संगठनको खुमबहादुर सुबेदी प्यानलबाट प्रथम उपाध्यक्ष उठ्न लाग्नुभएको हो । कार्की २०४४ असार १७ गते सोलुखुम्बु, दुधकोशी–३, बासामा जन्मिनुभएको हो । मानविकीमा स्नातकसम्मको अध्ययन गर्नुभएका उहाँ सम्पदा गार्डेन होटलका संचालक समेत हुनुहुन्छ । २०६० सालदेखि पोर्टर, गाइड हुँदै यो क्षेत्रमा जम्दै गर्नुभएका उहाँको विशेष रुचि समाजसेवामा छ । एड फर नेपाल र सुतार कार्की समाजका अध्यक्ष कार्की लायन्समा पनि आवद्ध हुनुहुन्छ ।… बाँकी »
टान निर्वाचन: सरिता लामाद्वारा कुमार थापा प्यानलबाट महासचिबमा उम्मेद्वारी, को हुन् लामा ?
शिखरपोष्ट डेक्स काठमाडौं । सफल पर्यटन ब्यबसायी सरिता लामाले ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)को आसन्न निर्वाचनमा कुमार थापा प्यानलबाट महासचिबको उमेद्द्वारी दिदैछिन् । टान ईतिहासमा पहिलो पटक महासचिब पदमा महिला उमेद्द्वारी परेको हो । रामेछाप जिल्लाको दोरम्बा गाउपालिका वडा नम्बर १, डडुवामा २०३८ साल पुस १९ गते जन्मिनुभएका लामा अफ् दी वाल ट्रेकिङका प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ । सन् २००४ मा नर्सिङ पेशा छाडेर ट्रेकिङ व्यवसायमा होमिनुभएकी लामा यस अघि टानको कार्यसमिति सदस्यको रुपमा निर्वाचित भएर सफलतापूर्बक आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुभएको थियो । व्यवसायमा महिला सहभागिता र सशक्तिकरणसङ्गै समग्र पदयात्रा ब्यबसायीहरुको एजेण्डा बोकेर यही भदौ २० गते हुन लागेको टानको… बाँकी »
शिखरपोष्ट रिपोर्टर हाल अमेरिकामा रहनुभएका पर्खी खालिङ राईले वल्र्ड कराते फेडेरेशन (डब्लुकेएफ)अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कराते निर्णायकको लाइसेन्स प्राप्त गर्नुभएको छ । कराते (काता र कुमिते विधा)को यो लाइसेन्स प्राप्त गर्ने उहाँ दोस्रो नेपाली हुनुहुन्छ । विगत ४ वर्षदेखि अमेरिकन राष्ट्रिय निर्णायकको रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएका खालिङले भरखरै मात्रै सो लाइसेन्स प्राप्त गर्नुभएको हो । यो लाइसेन्स प्राप्त गरेसँगै उहाँले २६ अगष्टदेखि १ सेप्टेम्बर २०१९ सम्म सञ्चालित पान अमेरिकन कराते च्याम्पियनसिप क्याडेट जुनियर (अण्डर २१)को निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ । इक्वेडरको गोयाकलमा आयोजित उक्त च्याम्पियनसिपमा नर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका र क्यारिवियनलगायत मुलुकको सहभागिता रहेको छ । सोलुखुम्बुको माप्य दुधकोशी गाउँपालिका वडा… बाँकी »
निटको तर्फबाट टान अध्यक्षको टिकट खुमबहादुर सुवेदीलाई !
काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल पर्यटन व्यवसायी संघ (निट)ले ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) अध्यक्षका लागि खुमबहादुर सुवेदीलाई उमेद्धवार बनाउने औपचारिक घोषणा गरेको छ । सुबेदी वर्तमान टानका बरिष्ठ उपाध्यक्षसमेेत हुनुहुन्छ । यसैबीच पिटले महासचिवमा कर्मा शेर्पा र कोषाध्यक्षमा ऋतु ग्यामदानलाई अगाडि सारेको छ । निटको यो घोषणासँगै टानको आसन्न निर्वाचनमा सुवेदी र नेकपाका कुमार थापाबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेकपाले यसअघि नै कुमार थापालाई अध्यक्षका उम्मेदवारको रुपमा घोषणा गरिसकेको छ। अध्यक्षका प्रत्यासी सुवेदी र थापा दुबै जना धादिङको हुनुहुन्छ ।
कुमार थापालाई टान अध्यक्षको उम्मेद्धार बनाउने सहमति !
शिखरपोष्ट रिपोर्टर काठमाडौं, ११ भदौं । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएशन अफ नेपाल (टान)को आसन्न निर्वाचनमा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले कुमार थापालाई अध्यक्षको उम्मेद्धार बनाउने भएको छ । विभिन्न चरणमा भएको छलफलपछि थापालाई अगाडि सार्न सबै एकमत भएर निर्णय गरिएको नेकपानिकट उद्योग तथा विशेष जिल्ला कमिटी अध्यक्ष कमल सापकोटाले शिखरपोष्टलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार अहिले अस्तित्वमा रहेको नेकपानिकट तीन वटै संगठनको प्रतिनिधित्व रहेको १५ सदस्यीय कार्यदलले थापाको नाम अनुमोदन गरेको हो । बुधवार नेपाल राष्ट्रिय पर्यटन व्यावसायी संगठनका अध्यक्ष मदन आचार्य, पर्यटन व्यावसायी संगठन नेपाल का अध्यक्ष सिताराम सापकोटा र नेपाल पर्यटन व्यवसायी संगठनका अध्यक्ष नवराज दाहालसहित बसेको कार्यदल बैठकको यस निर्णयमा नेकपा उद्योग… बाँकी »
सफल यूवा पर्यटन व्यवसायी कार्की सम्पर्क समितिको कोषाध्यक्षमा निर्वाचित
काठमाडौं । सफल यूवा पर्यटन व्यवसायी नविन कार्की नेपाली कांगे्रस सोलुखुम्बु काठमाडौं सम्पर्क समितिको कोषाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ । गत शनिबार काठमाडौंमा सम्पन्न बृहत भेलाबाट उहाँ कोषाध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित हुनुभएको हो । शिखरपोष्टका संरक्षकसमेत रहनुभएका उहाँ सुतार कार्की एकता समाजका सचिव पनि हुनुहुन्छ । त्यस्तै अन्य थुप्रै संघसंस्थामा नेतृत्व गरिसक्नुभएका उहाँको भूमिका विशेषगरी समन्वयात्मक हुने गर्दछ । सोलुखुम्बुको माप्य दुधकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर २, बासामा जन्मिनुभएका कार्की हिमालयन म्याजिक ट्रेक्सका प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ । आफ्नो व्यवसायिक दायरा बढाउँदै जाने क्रममा उहाँ हिमालयन भेहिकल सर्भिस र होटलमासमेत लगानी गर्नुभएको छ । पर्यटन क्षेत्रसँग उठबस गरेको छोटो समयमै व्यवसायिक सफलता हासिल गर्नुभएका कार्की… बाँकी »
नेकपा बिशेष कमिटी–जनसंगठन र सम्पर्क कमिटीको इञ्चार्ज–सहइञ्चार्जमा को को (सूचीसहित)
शिखरपोष्ट रिपोर्टर काठमाडौं, १ भदौ २०७६ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले विशेष कमिटी, जनवर्गीय संगठन र प्रदेश सम्पर्क कमिटीका इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तथा अध्यक्ष र सचिवहरू तोकेको छ । पार्टीले उद्योगी व्यवसायी विशेष जिल्ला कमिटी अध्यक्षको जिम्मेवारी यूवा पर्यटन व्यवसायी कमल सापकोटा (रामप्रसाद) र सचिवमा चन्द्र रिजाललाई दिइएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । उक्त कमिटीको इन्चार्ज पार्वत गुरुङ, सहइञ्चार्ज शशी श्रेष्ठ तोकिनुभएको छ । कसले कुन जिम्मेवारी पाए (पूरा सूचिसहित): उपत्यका विशेष जिल्ला कमिटी: इन्चार्ज लिलामणि पोखरेल, सहइन्चार्ज भानुभक्त ढकाल र अरुण नेपाल, अध्यक्ष राजन भट्टराई र सचिव लेखनाथ… बाँकी »